यो पुराना बामनेताको चरित्रले करिव करिव हाम्रा सबे पुराना बाम नेताको प्रतीनीधित्व गर्छ भन्दा फरक नपर्ला ।
फेरी यसका लेखक र जसको बारेमा लेखिएको छ ति नेता पनि नजिकै बाट परिचित भएकाले पनि मलाई यसमा बिशेष स्वाद लाग्छ ।
बाम नेता कि काङ्ग नेता
सबै स्बार्थिहरुको एउटै फेटा !
सबै स्बार्थी उस्तै उस्तै
सबै गोलो भकुन्डो जस्ताइ
देश को लागि सुस्त भाङ खा' को धतुरो
आफ्नो लागि चुस्त काग जस्तो चतुरो !
कस्लाई ठान्नु बिरङ्ग को
कस्लाई भन्नु कुन रङ्ग को !
दोसी यहाँ सबै छन
निर्दोस को पो छन ? !
लुनाजीको कविता दर्हो जादो रैछ, अर्को अर्थमा भन्दा दामी जादो रैछ, आशु कवि जस्तो !
सबै नेता त्यस्तै हुन, तर कामरेडहरुले कामरेडी खोल ओडेर खाने ठाऊंमा पुगेपछि आफ्नो बुर्जुवा कि के भन्छन नि त्यस्तो पारा देखाउन थाल्दा रैछन । त्यहि भएर मान्छेहरुको आक्रोश कामरेडहरु प्रति बढी हुन्छ, दोष कम भए पनि !
धन्यवाद है पाण्डा जि !( माफ गर्नुस् है मलाई तपाईंको नाम अङ्रेजी मा टाइप गरेर फेरी नेपाली मा लेख्नु आएन , यहाँ नेपाली मा लेख्दा कस्तो कस्तो देखिन्छ र पनि लेख्न वाध्य छु , नरिसाउनुस् है )
तपाईंको पनि त कमेन्ट दर्हो जा दो रहेछ नि !
दम छ तपाईंको कमेन्ट मा ।